यो वर्ष पुनर्निर्माणको काम अभूतपूर्ण हुनेछ : पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली | Ratopati
यो वर्ष पुनर्निर्माणको काम अभूतपूर्ण हुनेछ : पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeभदौ ८, २०७५ chat_bubble_outline0
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए तर सरकार परिवर्तनपछि २०७३ पुस २७ उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।
गत साउन ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनी फेरि प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकृतको रूपमा फर्किएका छन् ।
असार २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई पदमुक्त गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको थियो ।
पहिलो कार्यकालमा ७ लाख भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण सम्पन्न गरेको जस ज्ञवालीमाथि छ । पुनः २ वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेका ज्ञवालीले कसरी काम गर्दैछन् त ? प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीसँग गरेको यो कुराकानी :
प्राधिकरणको आफ्नै आर्थिक अवस्थाभन्दा प्राधिकरणले विभिन्न स्रोतहरूबाट दातृ निकायहरूबाट वा आफ्नै स्रोतबाट प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराउने हो । प्राधिकरणले छुट्टै ढङ्गले पैसा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने व्यवस्था पनि हैन । यो आर्थिक वर्षमा कुल १ सय ५१ अरब बराबरको बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । सबै कार्यक्रमहरू त्यसैमा आधारित भएर जान्छन् । त्यसबाहेक पनि अरू गैरसरकारी संस्थाबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सरकारभन्दा बाहिर रहेका तर प्राधिकरणले सम्झौता गरेका संस्थाहरूबाट पनि बजेट परिचालन भएर काम अघि बढ्ने हुन्छ । वित्तीय हिसाबले हामी यतिखेर विशेष अब आउने बाँकी कामका लागि यथार्थ रूपमा हामीलाई चाहिने पैसा कति हो ? कति आयोजनाहरू सम्पन्न ग¥यौँ ? कति आयोेजनाहरू सम्पन्न गर्नु छ, त्यसलाई कति रकम चाहिने हो ? त्यसका लागि हामीले कति उपलब्ध गराउन सक्ने हो ? त्यसको खाका बनाउँदैछौँ । जसले गर्दा सम्भावित वित्तीय चुनौतीलाई समाधान गर्नेगरी हामी अघि बढिरहेका छौँ ।
मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यो विषयमा चासो राखेर आवश्यक निकायहरूसँग समन्वय गरेर समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास गरिरहेको छु । त्यसमध्येमा रानीपोखरीको काम विगतमा नेपाली सेनालाई दिने कि भन्ने विषय पनि आइरहेको थियो । मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखसहितको टिम बसेर छलफल गरे । त्यसमा महानगरपालिका रानीपोखरी सेनालाई दिनुहँुदैन आफैले काम अघि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा जानुभएको छ । महानगरले सो काम अघि बढाउन जटिलता छ भने प्राधिकरण आफैले विशेष आयोजनाका लागि एकाई खडा गरेर काम अघि बढाउँछु भनेको छु । विभिन्न निकायहरूलाई कामको जिम्मेवारी पनि दिएको छु । यदि ती काम सम्बन्धित निकायबाट हुँदैनन् भने प्राधिकरण आफैले जिम्मा लिन्छ पनि भनेको छु ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा हामीले दुई खालका रणनीतिहरू अघि सारेका छौँ । म हँुदाखेरी नै ती रणनीतिहरू अघि सारेको थिएँ । एउटा जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेका घरपरिवारहरू जो चाहि अन्यत्र आफ्नो सुरक्षित खालको जग्गा छ भने तिनीहरूलाई त्यही जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने, यदि जग्गा छैन भने जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई लाख दिने व्यवस्था गरेका छौँ । जग्गा किन्न दुई लाख र घर बनाउन ३ लाख गरेर ५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा खालको प्रक्रिया हो ।
अघि पनि हामीले वित्तीय चुनौतीका बारेमा कुरा ग¥र्यौं । यसको समाधान के देख्नुभएको छ तपार्इंले ? वैदेशिक सहयोग आह्वान गर्ने कुराहरू वा सरकारसँग थप बजेट व्यवस्थाको कुरा हुन्छ ?
यसमा दुइटै कुरा हुन सक्छ, यसका निम्ति अहिले हामीले के सोच बनाइरहेका छौँ भने ९ सय ३८ अरब बजेट चाहिन्छ भन्ने जुन हाम्रो पहिले पञ्च वर्षीय योजना बनाउँदा आएको थियो, त्यसमा हामीले नगरी नहुने कामका लागि सरकारले गर्ने नियमित कामबाट सरकारबाट छुट्याउँछौँ । गर्नैपर्ने कामका लागि त्यो ढङ्गबाट लैजाने र स्रोतका लागि व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले लैजान्छौँ । ती तहका सरकारबाट गर्ने गरी पनि लैजान सकिन्छ । २ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्नका लागि कति पैसा चाहिन्छ, त्यो निकाल्न जरुरी छ । कति काम भयो, कति काम बाँकी छ ? सबैभन्दा पहिला त्यो काम निकाल्छौँ । त्यसपछि दातृ निकाय र सरकारसँग संयुक्त रूपमा छलफल अघि बढाउँछौँ । त्यसमा सरकारले कति राख्न सक्ने हो, दातृ निकायले पहिले प्रतिबद्धता जनाएको रकम कसरी कहिलेसम्म दिने हो ? र कुन क्षेत्रमा दिने हो ? यसबारेमा दातृ निकायसँग छलफल गर्छौं र अगाडि बढ्छौँ ।